PressReader - Ilanga: 2017-09-11 - Udinwe wavevezela uMoeneeb Josephs
Udinwe wavevezela uMoeneeb Josephs
Baphume kwiMTN8 wagxeka abalingani bakhe ngokuboza
Ilanga - 2017-09-11 - Ezemidlalo - MFANAFUTHI NDLOVU
UDEDELE isibhaxu somlomo kubalingani bakhe uMoeneeb “Slimkat” Josephs ongunozinti weBidvest Wits iwashiswa ijezi yiCape Town City ngo-2-1 emlenzeni wesibili we-semi-final yeMTN8 izolo ngeSonto ntambama eBidvest Stadium, eGoli.
ICity idlulele kowamanqamu ngo-3-1 uma kuhlanganiswa nomphumela womlenze wokuqala, kanti isizobhekana neSuperSport United ehlule iMaritzburg United ngo-2-0 ngoMgqibelo ebusuku eHarry Gwala Stadium. NeSuperSport inqobe ngo-3-1 uma kuhlanganiswa imiphumela yemilenze emibili njengoba kube ngu1-1 kowokuqala.
ICity inqobe ngamagoli abhakuziswe enethini nguLehlohonolo “Major” Majoro no-Amr Gamal okube ngumkhonto ogwaze ekhaya kwathi eleWits lashaywa nguThulani “Tyson” Hlatshwayo ongukaputeni wayo.
Ekhuluma emuva kwalo mdlalo uSlimkat, usole abalingani bakhe ngokungayikhombisi intshisekelo yokunqoba lo mdlalo. Uthi bekungabafanele vele ukufinyelela kowamanqamu. Uthi ukunqoba iligi kwabo kakusho ukuthi sebengcono, kumele bavuvukalelwe ngamakhanda. Uthi banezinto ezinkulu ezinhle ngenxa yebhola kodwa bayehluleka ukwenza ubulungiswa bemali abayiholayo.
UBenni McCarthy ocija iCity, uzwakalise enkulu injabulo ngokufinyelela kwezakhe kowamanqamu. Uthi okumchaza kakhulu wukuthi usayinqobe yonke imidlalo selokhu ethathe izintambo. Uthi ukuze unqobe kawudingi ukudlala ibhola elihle kwesinye isikhathi, kumele usebenzele ukuhlohla amagoli.
Ekhuluma eMgungundlovu emuva kokubukisa ngeTeam of Choice, u-Eric Tinkler ocija iSuperSport uthe ubhekene nomthwalo onzima wokuhlela kahle iqembu lakhe kwazise imidlalo icinene njengoba sekuzoqala neyeCaf Confederations Cup.
Nokho uthi kumjabulise kakhulu ukulunga kwamaphepha okusebenza kuleli ka-Azubuike Egwuekwe waseNigeria oyisitobha.
UFadlu Davids opheka iTeam of Choice, uthe kucacile kulo mdlalo ukuthi ezakhe zisathuka isisinga emidlalweni yemikhumulajezi kwazise bezibhekene nenkunzi emidwayidwa.
“Ngiyaziqhenya ngabadlali bami ngokufinyelela kulesi sigaba esikhishwe kusona yikilabhu enesipiliyoni esikhulu kunathi. Okuhle wukuthi kuningi esikufundile. Sesibheke ukuvuka ngamaZulu FC emdlalweni weligi ongoLwesibili (kusasa) ebusuku (eKing Zwelithini Stadium, eMlazi),” kusho uDavids okhale ngokulinyalelwa nguBrian Onyango waseKenya othinteke umsipha eseqenjini lesizwe langakubo. Uthi lo mdlali ngeke abe yingxenye yomdlalo womkhaya wabo noSuthu.
NGUMOENEEB Josephs ongunozinti weBidvest Wits esukumisa uThamsanqa Mkhize weCape Town City koweSemi Final yeMTN8 izolo ngeSonto ntambama eBidvest Stadium. IWits ihlulwe ngo-2-1 kulo mdlalo.